FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AMERIKANA BULLDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika amerikana bulldog
Coreah the American Bulldog amin'ny 21 volana
Ny tena hozatra, matanjaka sy matanjaka, nefa matevina amin'ny American Bulldog dia mijanona ho ambony kokoa amin'ny tongotra, mailaka sy haingana kokoa noho ny namany anglisy. Ny olona sasany dia voalaza fa afaka mitsambikina mihoatra ny enina na mihoatra amin'ny rivotra. Ny lehilahy dia mahery vaika kokoa ary manana lanjany mavesatra noho ny vehivavy voadio kokoa. Ny loha dia be valanoranony mahery. Mailaka sy maivana amin'ny tongony, ny tratra dia malalaka sy antonony lalina, manome ny fahatsapana ny fahaizan'ny atletisma sy ny hery. Ny hatoka dia hozatra, manidina avy eo an-tsoroka mankany an-doha ary mety manana dewlap kely. Ny loha dia toradroa, lehibe ary malalaka miaraka amin'ny takolaka hozatra mitovy amin'ny habe sy ny firafitry ny alika amin'ny ankapobeny. Misy faribolana voafaritra eo anelanelan'ny maso boribory, miaraka amina fijanonana lalina sy voafaritra tsara ary lalina. Ny vava mahery dia malalaka sy toradroa. Ny kaikitry ny tiany dia hety miverina, fa ny maivana, ny hety na ny manaikitra aza dia ekena. Karazan-tsofina isan-karazany no azo ekena ao anatin'izany ny felam-boninkazo, raozy, antsasatra ary mandroso. Ny sofina tsy mioty dia aleony ao amin'ny fenitry ny American Bulldog Breeders Association. Ny maso matetika no volontany, nefa mety misy loko rehetra. Mizara roa ny mason'izy ireo indraindray, izay volontsôkôlà ny maso iray ary manga ny iray. Alika fotsy no aleon'ny alika fotsy. Ny peratra maso mavokely dia heverina ho lesoka araka ny fenitra voasoratra. Ny orona dia mainty, mena, volontsôkôlà na mainty maintso no lokony mifanaraka amin'ny fenitra. Amin'ny alika misy orona mainty, ny lokon'ny molotra tiana dia mainty, na dia avela aza ny mavokely. Tokony ho feno ny molotra fa tsy malalaka be. Ny tongotra eo aloha dia mavesatra volo, mahery ary mahitsy. Ny avaratra dia tokony ho malalaka sy matevina miaraka amin'ny hozatra voafaritra tsara. Ny rambo dia ambany toerana, manomboka matevina amin'ny fotony, ary taper amin'ny teboka iray. Ny palitao dia malama sy fohy, ary tonga amin'ny alokaloka rehetra misy ny brindle mena, karazana ambaratonga fotsy, mena, volontsôkôlà, volondavenona, mena ary piebald.
Ny Bulldog amerikana dia tsy mivadika, azo itokisana, be herim-po ary tapa-kevitra. Tsy alika mpankahala. Mailo sy matoky tena, tena tia ankizy tokoa ity karazany ity. Fantatra amin'ny asany mahery fo amin'ny tompony. Izy io dia manana toetra voaaro miaro mafy, ary mila hentitra, matoky tena, tsy miovaova mpitarika fonosana . Fifaneraserana tsara SY fiarandalamby fankatoavana izy ireo amin'ny fahazazany, mba hisorohana azy ireo tsy ho voatokana amin'ny olon-tsy fantatra. Raha tsy misy an'izany mpitarika fonosana matanjaka saina iza no afaka milaza amin'ny alika izay andrasana aminy, mety ho mahery setra amin'ny alika hafa izany. Tokony ho eo akaikin'ny olona izy ireo ary hahafantatra ny toerana misy azy ao anaty fonosany mba hahasambatra tokoa. Ity karazana ity dia mirona amin'ny fandevenana sy fitenenan-dratsy. Tsy misy isan'andro fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana ho lasa strung ambony izy ireo ary mety ho lasa sarotra zakaina.
Haavony: Lehilahy 22 - 28 santimetatra (55 - 70 cm) Vehivavy 20 - 26 santimetatra (52 - 65 cm)
Milanja: Lehilahy 70 - 120 pounds (32 - 54 kg) Vehivavy 60 - 100 pounds (27 - 45 kg)
Ny American Bulldog dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary hanao izay tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny.
Ny Bulldog amerikana dia tokony horaisina amin'ny a dia an-tongotra lavitra isan'andro. .
Hatramin'ny 16 taona
Ankizy 11 eo ho eo
Ny palitao fohy sy henjana dia mora karakaraina. Borosio ary borosy amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Bulldog amerikana tany am-boalohany dia tsy vitan'ny fanatanjahan-tena miharo fihinan'ny omby fotsiny, fa ny tantsaha kely sy ny mpiompy izay nampiasa azy ireo ho alika miasa amin'ny asa rehetra toy ny mpiambina sy orza mihaza, lambo dia. Raccoon ary squirrel. Ny kinova Amerikanina an'ny Bulldog dia lava tongotra, haingana kokoa ary mailaka kokoa noho ny Alika fampisehoana anglisy . Ny tanjaky ny alika, fiarovana, faharanitan-tsaina ary fahaizany miasa no mahatonga azy ho mpiasa sarobidy ho an'ny tantsaha. Afaka ampiofanina hamily omby sy mpiambina avy amin'ny mpiremby izy ireo. Noho ny ezak'i John D. Johnson avy any Summerville, Georgia, misy ny American Bulldog ankehitriny. Taorian'ny niverenan'i Johnson avy tamin'ny Ady Lehibe Faharoa dia diso fanantenana izy nahita fa toy ny Mastiff Anglisy dia saika tanteraka izany lany tamingana . Nanapa-kevitra izy avy eo hanangona ireo santionany tsara indrindra azony hitany manerana ny faritra atsimo atsimo amin'ny ezaka hamerenana ny Bulldog Amerikanina avy eo amoron'ny fongana. Efa ela no niterahany ireo alika ireo noho ny olon-drehetra eto an-tany ary ny rainy dia nitombo azy ireo talohany. Lehilahy antitra izy izao ary ireo alika ireo dia efa nisy foana tao amin'ny fianakaviany. Izy irery no antony mahatonga azy ireo hisy ankehitriny. Raha tsy noho ny ezaka nataony dia ho faty izy ireo. Nanomboka niompana an-tsokosoko izy ireo nanomboka teo. Ny sasany amin'ireo talentan'ny American Bulldog dia ny mihaza, ny mpiambina, ny manara-maso, ny misintona lanja ary miambina.
AABC = Club Bulldog Amerikanina rehetra
ABA = Fikambanana Bulldog Amerikanina
ABCC = American Bulldog Club any Canada
ARF = Fikarohana momba ny biby
JDJB = fisoratana anarana John D. Johnson Bulldog
NABA = Fikambanan'ny Bulldog National American
NAPR = Registra Amerikana Purebred Avaratra
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Bulldog Amerikanina
Sarin'ny Bulldog Amerikanina 1
Saripika Bulldog Amerikanina 2
Sary Amerikanina Bulldog 3
Saripika Bulldog Amerikanina 4
Sary Amerikanina Bulldog 5
Sary amerikana bulldog 6
Saripika Bulldog Amerikanina 7
Sarin'ny Bulldog Amerikanina 8
Sarin'ny Bulldog Amerikanina 9
laboratoara basset hound mampifangaro alika kely amidy
Jack Russell Pomeranian Afangaroy alika kely hamidy
spaniel akoho sy shitzu mifangaro
bichon frize sy ny Cocker spaniel Mix
dorset olde tyme bulldogge amidy